एक समलिंगीको डाक्टरको संघर्ष : अनि म मोहम्मदबाट माया बनेँ
मंसिर ०५, २०७८ १४:३९ मा प्रकाशित
म तामिल नाडुको मदुरैमा एक केटा मान्छेको शरीर लिएर जन्मिएको थिएँ। त्यही कारण मेरा बुबा, आमाले मोरो नाम राखिदिए, मोहम्मद जाफर। मेरो परिवार एक कट्टर मुस्लिम परिवार थियो। मलाई थाहा भएदेखि नै आफू केटा भएकोमा मलाई घृणा लाग्थ्यो। म बच्चादेखि आमा कपडाहरु खेलाउने लगाउने गर्थेँ। मेकअफ गर्थेँ। जब ठूलो हुँदै गएँ। आफूलाई केटी भएको महसुस गर्दै गएँ।
मेरो चालचलन र बानीलाई मेरा बुबा निकै घृणा गर्थे। पटक–पटक भनिरहन्थे– तँ छक्का होस्, तँ किन केटाको रुपमा जन्म लिइस् ? अब तँ काम लाग्दैनस्। मलाई पिट्ने दुःख दिने धेरै गर्थे। मेरो बुबाले कुटेका घाउहरु शरीरभरि हुन्थे।
जब परिवारमा कुनै समारोह हुन्थ्यो, आफन्तहरु जम्मा भएका हुन्थे अनि तब मेरा बुबाले ‘यो छक्का हो, केटा भएर केटीको जस्तो व्यवहार गर्छ’ भनेर वेइज्जत गर्थे।
उनीहरुको सामुन्ने मलाई कुट्थे।
एकदिन म टुलमा बसिरहेका थिएँ। मेरो शरीर केटीको जस्तो देखिएछ। त्यस कुराका लागि बुबाले खुब पिटे। ‘अब देखि यो पाइन्ट कहिल्यै नलगा, पहिले पनि सर्ट पाइन्टबाट बाहिर निकालेर लगाउने गर’ धेरै गाली गरे।
मेरी आमाले मलाई धेरै माया गर्थिन्। तर मैले केटीको जस्तो व्यवहार गरको उनलाई पनि मन पर्दैनथ्यो। मेरो अनुहारमा डण्डिफोर आएका थियो। मैले अनुहारमा बेसार लगाएँ। त्यो देखेर आमाले मलाई धेरै पिटिन्।
हामी दुई दाजुभाई र एक बहिनी थियौँ। मेरा दाजु म भन्दा डेढ वर्ष जेठा थिए। उसको स्कुल र गाउँमा पनि साथीहरुको समूह थिए। उ समूहको नाइके बनेर हिड्थ्यो। उसका साथीहरुले उसलाई 'तँ पनि भाइजस्तै छक्का होस्' भनेर जिस्काउँथे। यो कुराले मेरो दाजुलाई रीस उठ्थ्यो। उसले बेइज्ज महसुर गर्थ्यो। त्यही कुरालाई लिएर उसले मलाई बेस्सरी कुट्थ्यो। आफ्ना साथीहरुलाई पनि पिटाउन लगाउँथ्यो।
मेरो दाजुलाई स्कुल जैलान र स्कुलबाट छोड्नका लागि १०–११ जना साथीहरु घरमा आउँथे। तर म एक्लै स्कुल जाने-आउने गर्थेँ। मलाई भेट्न कोही साथी घरमा आउँदैन थे। म पनि कसैको घरमा जान्नथेँ। किनभने मलाई केटीले जस्तै घरमा रहन, घरका काम गर्न, आमालाई सघाउन मनपर्थ्यो। बच्चादेखि नै खाना बनाउने, आमाको सारी मिलाइदिने काम गर्थेँ। जब आमाले मेरो बारे थाहा पाउँदै गइन् अनि मलाई यस्ता काम नगर्न र दाजुसँगै बाहिर खेल्न जाने आग्रह गर्न थालिन्।
बुबाले मलाई सुनाउँथे–हेर तेरा दाजुका कति धेरै साथी छन्। साथीहरुका माझ उ कति प्रिय छ। अनि तँ चाँहि किन यस्तो ?
एक पटक स्कुलमा कक्षाका केटाहरुले मिल्ने साथीहरुको समूह–समूह बनाइरहेका थिए। एक केटाले मलाई प्रस्ताव गरे–हामीले मिल्ने साथीहरुको समूह बनाइरहेका छौँ, तँ हाम्रो समूहमा आइज, अनि केटीको जस्तो बानी छाड्। म त्यो गर्न सक्दिन होला, म समूहमा सामेल हुन्न भनेँ। त्यसपछि उसले मलाई बेस्सरी पिट्यो। ‘मेरो कुरा नमान्ने तँ छक्का भन्दै’ धेरै गाली गर्‍यो।
स्कुल घर सबैतिरको तिस्कार र वेइज्तीले म हैरान, थिएँ अनि निराश पनि।
अब मैले योजना गरेँ कि धेरै राम्रोसँग पढ्छु, ताकि घर, समाज सबैले मेरो इज्जत गरुन्। स्कुलमा राम्रो नतिजा ल्याएँ। त्यसपछि मेडिकल पढ्न कर्नाटकको फादर म्यूलर होमियोप्याथी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएँ। बाबाले त भर्ना गर्न मानेका थिएनन्। आमाले उनलाई मनाइन्।
साढे ५ वर्षको कोर्स सकेर म डाक्टर बनेँ। म डाक्टर बनेको कुराले मेरो दाजुलाई अप्ठेरो लाग्यो क्यारे। म घर फर्कनु भन्दापहिले नै घर छाडेर दुबई गयो। अब मलाई आमा, बुबाले विहेका लागि दवाव दिन थाले। मैले अस्वीर गर्दैँ गएँ। विहेका लागि आउने दवावबाट कसरी बच्ने भनेर उपाय खोजिरहेको थिएँ। यसैबीच प्राकृतिक चिकित्सा पढ्नका लागि अमेरिकाको वासिङटन स्टेटस्थित एक विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेँ।
त्यहाँ जानका लागि डाक्टरी काम गरेर मैले केही पैसा कमाएको थिएँ। यो ५ वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम थियो।
अमेरिका गएपछि मात्रै मैले वास्तविक खुसी हासिल गरेँ। त्यहाँको समाजमा समलिंगीलाई स्वीकार गरिन्थ्यो। म त्यहाँ रहन थालेपछि आफूलाई समलिंगी भएको घोषणा गरेँ। सुरुमा मैले आफू ‘गे’ भएको भन्दै उनीहरुको समूहमा गएँ। कुरा बुझ्दै गएपछि मैले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर भएको पाएँ। मँ केही 'गे' हरुसँग डेट पनि गएँ जब उनीहरुले म ट्रान्सजेन्डर भएको थाहा पाए अनि छाडिदिए।
पढाइ सकेपछि म क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्स गएँ। जहाँ समलिंगीहरु पैसा वाल हुन्थे।कमाएको पैसा बच्थ्यो। उनीहरुको घर, गृहस्थीमा खर्च हुँदैनथ्यो।
अमेरिकी समाजमा पनि विशेष गरी महिला ट्रान्सजेन्डरमाथि धेरै हिंसाका घटना भएको मैले देखेको छु। म आफू चाँहि डाक्टरी पेशा गर्ने र पैसा पनि राम्रै कमाउने भएकाले यस्तो अपमानित हुनु परेन।
जिन्दगीको दोहोरो भूमिकाले निकै हैरानी भइरहेको थिएँ। पूर्णरुपमा केटी बनेर बाँच्न चाहन्थेँ। लिंग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरेँ। साइको थेरापी र हर्मोनहरुको प्रयोग गर्न सुरु गरेँ। मैले बैंककमा लिंग परिवर्तनको शल्यक्रिया गराएँ। यो शल्यक्रिया मेरो शरीरमा रहेको लिंगलाई योनीमा बदल्नका लागि थियो।
शल्यक्रिया सफल भएपछि बल्ल मैले आफूलाई पूर्ण मान्छेको रुपमा पाएँ।
अब म पूर्ण रुपमा केटी बनेँ। तर यो त्यति सजिलो थिएन। यसपछि मैले कडा डोजको हर्मोन औषधि खानु पर्‍यो। करिब डेढ वर्षसम्म म न केटा जस्तो देखिन्थेँ, न पूरै केटी जस्तो। बाटो हिँड्दा मान्छेहरु मलाई ठग, पागल इत्यादी भनेर गाली गर्थे।
म जुन क्षेत्रमा बस्थेँ। त्यहाँ क्यालिफोर्निया सरकारले मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरुलाई राख्थ्यो। उनीहरुको उपचार गरिन्थ्यो। म जुन विल्डिङमा १२ वर्ष पहिला केटा भएर बस्न सुरु गरेको थिएँ। अहिले केटी बनेको थिएँ। यो परिवर्तन धेरैले देखेका थिए। म बसेकै विल्डिङमा बस्ने मानसिक रोगी, थिए जसले औषधि खान छाडेका कारण थप रोगी बनेका थिए। उनले मलाई केटाको रुपमा देखेका थिए। जब म शल्यक्रिया गरेर फर्किएँ, उनले केटीको रुपमा पाए। उनी अचानक मेरो ढोकामा आएर भने– म तिमीसँग सेक्स गर्न चाहान्छु। केहीबेरमा उनले तँ किन नखरा पारिरहेकी छस् तलाई म बलात्कार गर्छु भन्दै मलाई लटेखे। उनी भनिरहेका थिए–मलाई ओबामा सरकारले बलात्कार र हत्या गर्नका लागि खटाएका छन्। भाग्दाखेरी लडेर मलाई चोट लाग्यो। मेरो फोन पनि फुट्यो।
त्यसपछि अमेरिकामा मैले बलिउडमा अभिनेत्री भएर काम गर्ने अवसर पाएँ। मेरो बारेमा केही डकुमेन्ट्री पनि बनेका छन्। ‘मोहम्मद टु माया’ नामको सर्ट फिल्म पनि बनेको छ।अमेरिकाको 'एलजीबीटी कम्युनिटी'मा मेरो धेरै नाम छ तर मेरा रोलमोडल विजयन्ती माला र हेमा मालिनी हुन्। उनीहरुले जस्तै काम गर्ने मनसायले भारत फर्किएकी हुँ।
म अमेरिकी नागरिक हुँ तर मेरो मनमनमा भारतको माया छ। म हिन्दी, हैदरावादको उर्दु, तामिल भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्छु।
म मुस्लिम परिवारमा जन्मिएको भएपनि सानैदेखि हिन्दुधर्म धेरै मनपर्थ्यो। म सानैदेखि मिनाक्षी मन्दिरमा जान्थेँ। कयौँ पटक गएको छु। हिन्दु धर्म मन परेकै कारण मैले लिंग परिवर्तनपछि नाम माया राखेकी हुँ।
मसँग लाइसेन्स छ। चाहेको बेलामा मेडिकल अभ्यासमा फर्कन सक्छु तर म अहिले त्यो गर्न चाहन्न। यस कारण कि–मैले हरेक ठाउँमा भन्नु पर्नेछ, म एक ट्रान्सजेन्डर हुँ।अधिकांशले त्यो स्वीकार्न चाहँदैनन्। समाज, परिवार, साथी, जागिर, मेडिकल अभ्यास सबै-सबै गुमाएको छु। यति धेरै गुमाएर पनि म भन्न चाहन्छु– म खुसी छु। म भाग्मानी पनि छु किनभने एकाबाहेकले यसरी आफ्नो वास्तविकता खुलाएर बाच्न पाएका छैनन्। यदि म केटाबाट केटी बनेको थिइन् भने, जीवित पनि रहन्नथेँ होला। मैले आत्महत्या गरिसकेको हुन्थे। अहिले मैले जे पाएको छु, यो नै मरा लागि व्यापक छ।
भास्कर दैनिकसँग माया जाफरले गरेको भिडियो कुराकानीबाट अनुवादित्